ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ အင်ဒိုနီးရှား အသင်းကို ၄ - ၂ ဂိုးဖြစ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်း - Myanmarload
ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ အင်ဒိုနီးရှား အသင်းကို ၄ - ၂ ဂိုးဖြစ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်း
လွန်ခဲ့သော ၈ လ က 07:17 December 08, 2019
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကကျင်းပလျက်ရှိသောအကြိမ် ၃၀မြောက် ၂၀၁၉ ဆီး ဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာ ယူ - ၂၂ အသင်း ကတော့ အင်ဒိုနီးရှားအသင်း နဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့် ပွဲစဉ်ကို ယနေ့ယှဉ်ပြိုင်ကစားရာမှာ အင်ဒိုနီးရှား အသင်းက မြန်မာအသင်းကို (၄- ၂) ဂိုးဖြစ် အနိုင်ယူပြီး ဗိုလ်လုပွဲကိုတက်ရောက်သွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲချိန်ပထမပိုင်းမှာနစ်ဖက် အသင်းကတော့ အပြန်အလှန် တိုက်စစ်ဆင်ကစားထားပြီး ဂိုးမရရှိဘဲ ဒုတိယပိုင်း မှာ အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုအဖွင့်ဂိုးကိုစတင်ပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Photo. Credit. - MFF
အင်ဒိုနီးရှား အသင်းက ၂ ဂိုးဖြစ် ဦးဆောင်နေပြီး ပွဲချိန် မိနစ် ၇၀ ကျော်မှာတော့ မြန်မာအသင်းက ၂ဂိုးဇာတ်တိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန်မိနစ် ၉ဝ ပြည့်တဲ့အထိကိုတော့သရေ ကစားထားနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် အချိန်ပို မိနစ် ၃၀ ယှဉ်ပြိုင်ကစားချိန်မှာ အင်ဒိုနီးရှား အသင်းကတိုက်စစ်ဆင်ကစားရာမှာတော့ ခြေပဂိုး ၂ ဂိုးကို ပေးလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit. - MFF
အင်ဒိုနီးရှား အသင်းကတော့ မြန်မာအသင်းကို ပွဲချိန် ပြီးဆုံးချိန်အထိဇာတ်တိုက်ဖိအားပေး တိုက်စစ်ဆင်ကစားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းကတော့အကောင်းဆုံး ကစားထားပေမဲ့လည်း ဗိုလ်လုပွဲ နဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ ကဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာအသင်း ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတင်ပြရင်း အားပေးစကားလေး ပြောလိုက်ပါအုန်းနော်......။